Galmada oo la moogaado muddo dheer waxay sababi kartaa dhibaatooyin aan loo jeedin… – Hagaag.com
Galmada oo la moogaado muddo dheer waxay sababi kartaa dhibaatooyin aan loo jeedin…
Posted on 9 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Haddii aad isleedahay ciriiri ayuu noqonayaa Maya, Ma heli doontid “Ciriiri”:
Ka fogaanta galmada kama dhigayso farjigaaga “Ciriiri”. Taasi waa khuraafaad reer magaal. Dareenka ciriiriga xubinta taranka haweeneyda ma saameynayso tirada galmada ee lammaanahaada, haddii aad qaadato nasasho qasab ah kuuma soo celineyso bikradaada. Si kastaba ha noqotee, unugyada taranka haweenka ayaa laga yaabaa inay ka baxaan caadadooda.
Ragga ayaa aad ugu badnaanaya inay yeeshaan Cilladaha xubinta taranka:
Tani waa arrin xiiso leh, laakiin suurtagal maahan oo mid la soo dhaweynayo ma ahan haddii aad tahay qof jilicsan oo waqti ka maqnaa howlaha galmada. Ka fogaanshiyuhu wuxuu u muuqdaa inuu kordhinayo suuro galnimada in xubinta taranka ragga ay istaagi waaydo. Daraasadaha la sameeyay ayaa waxay diiradda saareen ragga da’da ah, laakiin dhammaantood waxay ku midoobeen gabagabada in galmada joogtada aheyn ay saameyn togan ku leedahay galmada ninka. (Adeegso ama iska Lumi), sidii ay ahaan jirtayba. (Waxaa sidoo kale jira suurta galnimada in biyaha oo joogto kaaga baxo ay ka caawineyso kahortaga kansarka qanjirka (Prostate Cancer).
Nidaamkaaga difaaca oo noqonaya mid nugul:
Waxay umuuqataa firfircoonaanta galmada ay runti xoojiso dhinaca fiican ee shaqada difaaca jirka. (Haweenka, isbedeladan ayaa u muuqda kuwa lagu bartilmaameedsanayo si ay u fududaato inay uur yeelato.) Dhinaca isku dhafan, waxaa nasiib darro ah, haddii aadan had iyo goorba mashquul ku ahayn arrintaasi, ma heleysid faa’iidooyinkaas, oo waxaa laga yaabaa inaad u nuglaato cudurada iyo caabuqyada kaasi oo habka difaacaagu uu xiri karo.
Laydhkaaga oo hoos u dhaco:
Xaqiiqdii tani gabi ahaanba ma cada. Khubarada qaar ayaa si xoog leh ugu doodaya waxqabadka galmada caadiga ah sida “shiddida dabka” ee leydhka, waxaa la rumeysan yahay ka fogaanshaha inuu yareyn karo rabitaanka galmada muddo kadib maadaama jirkaagu hakinayo jawaab celinta hormoonka. Khubaro kale sidaasi kuma waafaqsana, sidaas darteed waxay noqon kartaa arrin shaqsiyadeed oo ku xidhan khibradaada galmada.
Waxaad noqon kartaa qof murugeysan oo walaacsan:
Tani waa mid kale oo ka mid ah xaaladahaas oo xiriirka ka dhexeeya waxyaabaha dhinaca wanaagsan (galmada joogtada ah iyo baabi’inta walbahaarka ama walaaca), dhinaca xun waa (galmo la’aan iyo falcelinta walaaca oo sareysa). Daraasado ayaa ogaatey in dadka aan galmada joogtada ah sameynin ay leeyihiin dhiig kar sare oo ka imanaya walaaca badan. Gaar ahaan, haddii aad dooneysid inaad yareysid strees-ka badso galmada, maqnaanshaha galmo ma u noqon karto saameyn fiican awoodaada guud si aad ula tacaashid waqtiyada walaaca leh.
Caafimaadka Wadnahaaga oo wax gaara:
Nolol galmo oo wanaagsan ayaa si xoog leh loola xiriiriyaa caafimaadka wadnaha, iyo gelitaanka abaarta galmada waxay meesha ka saartaa hormoonnada iyo aerobic-ka. Laakiin shaqo badan lagama qabanin si sax ah waxa ku dhaca wadnaha ka dib muddo galmo la’aan ah. Waxaa laga yaabaa inay sidaas tahay uun haddii aad ku qaadatid niyad-jabkaaga dhinaca galmada, markaa wadnahaagu wuxuu ku dhamaan doonaa caafimaad ka badan sidii ay ahayd kahor intaanad joojin.
Waxaad Muddo Dheer Kusoo Kordhin Kartaa Qoyaan:
Waxaa soo baxday in galmo caadi ah asal ahaan ay tahay hab lagu habeeyo xubnaha galmada, iyo in waqti la’aantu ay ka dhigantahay inay waxyar ka gaabiyeen bilowga. (Waxaana laga yaabaa inuu ubaahanyahay xoogaa gacan ku qabasho ah. dadka ku xeesha dheer cilmiga caafimaadka galmada waxay tilmaameen in qoyanka uu fududeeya in la helo galmo raaxo leh, balse haddii uu qalalan yahay waxaad u baahan karta xooggaa caawimaad dheeri ah si howshaasi u dhacdo.
Waxaad si weyn hoos ugu dhigaysaa Khatarada cudurada UTI iyo STDs:
Ugu dambeyntiina, xoogaa war wanaagsan. Qaybta STD waxaa laga yaabaa inaysan u dhicin si la yaab leh, laakiin UTIs ( Urinary tract infections)(infekshinka kaadi mareenka) waxaa badanaa keena bakteeriyada marinka kaadi mareenka inta lagu jiro galmada (gaar ahaan markaad gadaal ama futada isticmaashid). Marka nolosha galmo la’aanta waxay kaa dhigaysaa ammaan. Si kastaba ha noqotee, waad ku qaadi kartaa STD (Sexually transmitted dieases) kala duwan iyo UTI-yada hab aan aheyn galmada, sidaa darteed gabi ahaanba lama badbaadayo hadaydan isku ekaanin.
Ma Noqon Doontid Qof caqli badan sida loo baahan yahay:
Waxa jira sheeko duug ah oo ka timid naag gabowday oo dhaheysa ka fogaanshuhu wuxuu kaa dhigaa mid caqli badan. Laakin Runtu waa ay ka soo horjeedda sidaasi: Saynisyahanada ayaa muujiyey in firfircoonaanta galmadu ay kor u qaaddo koboca neuron-ka maskaxda. Halka Galmo la’aanta, ay keento in maskaxda koboca ka yaraado. Sababtoo ah waxaad si lama filaan ah u noqotay mid aan wax soo saar leheyn oo dhameystirnayn.